चुनाव सार्न प्रचण्डलाई चौतर्फी दवाव, अब के गर्लान प्रचण्डले ? – Setosurya
चुनाव सार्न प्रचण्डलाई चौतर्फी दवाव, अब के गर्लान प्रचण्डले ?
काठमाडौं: सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्न प्रधानमन्त्री पुषपकमल दाहाल प्रचण्डलार्इ चाैतर्फी दवाव अाएकाे छ ।
शुक्रबार मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच भएको सहमतिको हवाला दिँदै निर्वाचनको मिति सार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयुक्तसँग छलफल गरेको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी भएपनि वैशाख ३१ मा नै निर्वाचन गर्ने अडान लिएका छन् । अहिले भारतले पनि चुनाव सार्न दवाव दिएको खुलासा भएको छ ।
‘निर्वाचन सर्ने हल्ला फिँजाइएको हो’ सचिवालय श्रोतले भन्यो ‘जसरी पनि वैशाख ३१ मा नै चुनाव हुन्छ ।’
मधेसी मोर्चाभित्र भने चुनावको मितिबारे दुईवटा धार रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक केन्द्रीय नेताले बताए । “हाम्रो तयारी पुग्दैन भन्ने मधेसवादी दलहरुको बुझाई छ” श्रोतले भन्यो, “त्यही भएर मिति सार्ने कुरामा मधेसवादी दलहरुबीच छलफल जारी रहेको छ ।”
स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्न एमालेलेसमेत दबाब दिएको कुरा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमन पुन अनन्तले केही दिन अघि बताएका थिए । त्यसो त मधेसी मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादव समूहले भने स्थानीय निकायको निर्वाचन नै नगर्ने बरु सोझै केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र यादवसँगै राजनीतिक एजेण्डामा सहकार्य गरिरहेको नयाँ शक्तिले समेत स्थानीय निर्वाचन अहिले गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएको थियो । यद्यपी पार्टीको यसै साता सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा खर्च गर्ने कार्यनीति पारित गरेको छ ।
स्रोतकाअनुसार भारतभित्रका केही शक्ति केन्द्रहरुले चुनावको मिति सार्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनीहरुले दुई चरणको चुनाव नगरी दुई तीन महिना सारेर असोज या कार्तिकमा एकैपटक निर्वाचन सार्न दबाब दिएका हुन । मधेस केन्द्रीत दलहरुभित्र यो दबाब चर्को रहेको श्रोतले बतायो ।
“अहिले निर्वाचन सार्ने, पछि स्थानीय होइन, एकैपटक केन्द्रीय संसदको चुनाव गरौं भन्ने उनीहरुले भनिरहेका छन् । यही किसिमको अडान राख्न दबाब समेत दिएका छन्” श्रोतले भन्यो, “मोर्चा घटक दलहरुभित्र समेत यसबारेमा दुई मत देखिएको छ ।” अहिले बाहिर आएका हल्ला र चर्चा पनि यही शक्ति केन्द्रले फिँजाउन लगाएको श्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले भने जसरी भएपनि वैशाख ३१ मा घोषणा गरिएको मिति सार्न नहुने अडान राखेका छन् ।
बुढानिलकण्ठ श्रोतका अनुसार, मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको खण्डमा उनीहरुको बाहुल्यता रहेको केही क्षेत्रमा केही दिनका लागि चुनाव सार्न सकिनेसम्म लचक हुन सकिने प्रचण्ड र देउबाको सहमति बनेको छ । “तर वैशाख ३१ को मिति भने कुनै पनि हालतमा सर्दैन” श्रोतले भन्यो ।
तिर्थयात्री बोकेको बस मुक्तिनाथमा दुर्घटना, ५ को मृत्यु, ३० जना घाइते
अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले अब जुनसुकै बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सक्ने
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नाम लिँदै एमालेले भन्यो: तिवारीको हत्या षड्यन्त्रपूर्ण
फेसबुक लभ गरिरहनु भएको त छैन ? ख्याल गर्नोस् बर्बाद बनाउला !
प्रहरीका ३५ डिएसपीको एसपीमा बढुवा (नामावलीसहित)